21 EYONA NDLELA IPHAMBILI YOKUCHEBA IINWELE (2021 ISIKHOKELO) - IINWELE ZAMADODA
I-21 Mid Fade Haircuts
Eyona Iinwele Zamadoda I-21 Mid Fade Haircuts
Ukucheba kwenwele okuphakathi kuye kwanda ekuthandeni kwihlabathi liphela. Ikwabizwa ngokuba kukuphela okuphakathi, ukuphela kwamadoda esiphakathini kuqala phakathi kumacala nasemva, kukhokelela…
Ukucheba kwenwele okuphakathi kuye kwanda ekuthandeni kwihlabathi liphela. Ikwabizwa ngokuba kukudinwa okuphakathi, ukuphela kwamadoda esiphakathini kuqala phakathi kwamacala nangasemva, okukhokelela kwinwele ephelileyo eseleyo phakathi komgangatho ophantsi nophakamileyo. Ngenxa yokuba i-taper fade iphakathi inikezela ngokudibanisa iinwele ngokuthe ngcembe, ilungile kumadoda afuna ukusikwa kunye nezitayile zale mihla.
Ngaphezulu, abafana banokudibanisa i-mid fade kunye neentlobo ezahlukeneyo zokuphela ukwenza i-bald fade ephakathi, i-mid fade undercut, okanye i-middle zero fade. Khumbula ukuba ungasoloko ulungelelanisa iinwele zakho eziphakathi eziphelayo ngokucela ukuba umchebi wakho asebenzise amanani ahlukeneyo okucheba ukulawula ukuba uphela ngokukhawuleza emacaleni kunye nendlela ezimfutshane ozicheba ngayo iinwele. Ngelixa i-taper ishiya iinwele ezimfutshane kakhulu kufutshane noboya beenwele, ulusu luyaphela luza kudibanisa amacala akho, umva nentamo kulusu lwakho.
Nokuba ufuna ukudibanisa umva ophakathi kunye neenwele ezimfutshane, eziphakathi, okanye ezinde ngaphezulu, zininzi iindlela zokwenza isitayile sokucheba kwamadoda. Ngeenwele zamadoda ezipholileyo ezingenakubalwa onokukhetha kuzo, nantsi imizekelo yezona zinwele ziphakathi ziphakathi!
1Eyona ndawo iphakathi yokuPhela kweenwele
MbiniUkuphela kweTaper Tade
3Ukuphela kwamadoda okuPhakathi
4Phakathi kweBald Fade
5Phakathi kweFade + phezulu
6Mid Fade + Izinwele ezimfutshane
7UkuPhela okuPhakathi okuPhakathi
9Phakathi kweFade Undercut
10I-Mid Fade Comb ngaphezulu
Shumi elinanyeIsimbo sendlela esiPhakathi esiPhakathi
12Phakathi koLusu luphela
13Phakathi kweZero Fade
Shumi elinantlanuUmgangatho ophakathi
16Izinwele eziPhezulu eziPhezulu + eziPhakathi
170 1 Fade + Quiff
18Phakathi kweDrop Fade
Eyona ndawo iphakathi yokuPhela kweenwele
Ubomi obuphakathi buguqulwa, bunodidi, kwaye kulula ukufumana. Oku kunqunyulwa kungadityaniswa neenwele ezimfutshane ezinje nge abasebenzi abasikiweyo , ukusikwa kwe-buzz , Isityalo saseFrance , okanye umphetho wokugqiba okumiselweyo.
itshathi ye-synastry yasimahla
Kwangokunjalo, abafana banokuba neenwele eziphakathi ezide zongezwe kubude obuphakathi okanye kwiinwele ezinde ezinje nge-quiff, pompadour, ndibuyele emva , ifeksi , okanye ikama ngaphezulu .
Ngapha koko, iinwele eziphakathi eziphakathi zisebenza kakuhle nazo zonke iintlobo zeenwele, kubandakanya iinwele ezomeleleyo, ezibhityileyo, ezirhangqayo kunye neenwele ezijijekileyo. Abafana abaneenwele ezishinyeneyo kufuneka ngokuqinisekileyo basike umqolo kunye namacala amafutshane nge-bald fade edala ukwenza umahluko ofunekayo wokujonga amehlo kwisitayile ngaphezulu.
Ekugqibeleni, ukusika okuphakathi kufikelela ngokugqibeleleyo ngamacala amafutshane amahle, iinwele ezinde eziphezulu. Jonga ezi zinto ziphakathi ezothusayo zokuphefumlelwa ngaphambi kokucheba iinwele kwakho okulandelayo!
Ukuphela kweTaper Tade
I-taper ephakathi yokucheba iinwele yenye yezona ndlela zingenasiphelo, ezicocekileyo zokusika amadoda. Ngokungafaniyo nesiphelo esisezantsi, esinokushiya iinwele ezininzi emacaleni, okanye ukuphela okuphezulu, okunokubhengeza isikhumba esininzi kakhulu, i-taper esembindini ilungile kwiimeko eziqhelekileyo nezisesikweni, ngakumbi iingcali ezisebenzayo. Ukuboniswa ngasentla, uya kufumana i-taper fade entsha kunye nomgca kunye neenwele ezinqamlekileyo.
Ukuphela kwamadoda okuPhakathi
Ukuba unzima ukukhetha i-fade ephezulu ephantsi, emva koko iinwele eziphakathi zokucheba iinwele zinokuba lukhetho olufanelekileyo kuwe. Apha, uya kubona i-bald medium fade enomilo phezulu.
amagama eenwele zamadoda
Iinwele ezimfutshane ukuya kubude obuphakathi ngaphezulu zitshintshelwe kwelinye icala ukwenza ikama egqibeleleyo ngaphezulu. Ngelixa ikama eliphakathi lifiphala ngaphezulu lihleli likhangeleka njengesitayile, le nwele ikwanokusebenziseka ngokwaneleyo ukwenza isitayile senani lezinye izinto eziphakathi eziphakathi, ezinde ezinde zezinwele.
Phakathi kweBald Fade
Ukuxelela i-barber yakho ukuba ufuna i-bald fade kuthetha ukuba ufuna ukuba amacala akho achetywe yonke indlela ukuya eluswini. I-bald fade ikwahlukileyo okuphezulu, iinwele ezingathandekiyo ezibonakala zintle nezininzi zezinwele zamadoda eziphezulu.
Umzekelo, abafana banokucela ukuba i-bald fade ibe ne-3 ngaphezulu ukuze bafumane ukuphakama okuphezulu nokuqinileyo, ukusika i-buzz okanye isityalo saseFrance. Ngokufanayo, ungashiya iinwele zakho ixesha elide ukuze wenze isitayile, udibanise, ubuye umva, okanye ujongeke.
Phakathi kweFade + phezulu
Oku kuphela okuphakathi kunye neenwele ezinde ngaphezulu ngumzekelo ngqo esasiwuchaza apha ngasentla. Kuba ubude obuphakathi kunye neenwele ezinde bezisoloko zihamba, ukudibanisa phakathi kokuphela okanye ulusu luphele emacaleni ngeenwele ezinde ngaphezulu kuyakuvumela ukuba wenze isitayile sezinwele ezipholileyo. Oku kusikwa kuphelileyo, ukumila, kunye neenwele ezomeleleyo ezenziwe ngombala zezi mini kwaye zinemfashini.
Mid Fade + Izinwele ezimfutshane
Ezona fades zilungileyo zinokongezwa nakweyiphi na inwele okanye ubude beenwele. Oku kuphakathi okuphakathi kweenwele ezimfutshane kubonelela ngesicoci esicocekileyo esineenwele ezishinyeneyo. Ukuhlanjwa kunye nasemva, le pompadour imfutshane inesitayile kwaye inzima. Ngelixa amacala amafutshane, imeko ephezulu ende iqhubeka nokulawula, abafana bahlala benokhetho lweenwele ezimfutshane. Ukuphela okuphakathi kunye neenwele ezimfutshane ngaphezulu ngekhe kuphume-kwisitayile.
UkuPhela okuPhakathi okuPhakathi
Le nwele iphakathi ephezulu yokuphela kweenwele ikhangeleka intle macala onke. Ngokubhabha okungenasiphako kwamacala nangasemva, umphetho oswiti phezulu, kunye neenwele ezingqindilili ezibhrashiweyo ngasemva, le iinwele zamadoda ezinesitayile ziyintandokazi kwindawo yokucheba iinwele ngesizathu esihle. Ukugqitywa okuqaqambileyo sisiphumo se pomade ekumgangatho ophezulu oko kuyakwandisa umthamo kwaye akuyi kubala ubunzima beenwele.
iitattoos ezimbi zabafana
Ubunzulu obuphakathi buphakathi kukucheba iinwele okuthandwayo kwamadoda. Isitayile ngenxalenye enzima yekama ngaphezulu, umgca phezulu, kunye namacala asika isikhumba, iinwele eziphakathi eziphakathi eziphantsi ziyaguquguquka ngokwaneleyo ukulungiselela zonke iinwele ezishushu. Kwaye, i-razor fade yongeza umnxeba omtsha.
I-middle fade undercut yindibaniselwano epholileyo yeendlela ezimbini ezilungileyo zokusika iinwele zomfana emacaleni nasemva. Le ndlela yokufihla iphakathi ishunqulwe imfutshane kakhulu ngeenwele ezinde ngaphezulu. Le ndlela yokwenza iinwele itsala iinwele zakho ukuya phambili ukwenza umphetho ngaphambili, kunye nezinye ii-bangs ziwela ecaleni kwebunzi. Kumadoda ukuba azame ukusika kunye nezitayile ezahlukeneyo, oku kujongeka kufanelekile kukudutyulwa. Emva kwayo yonke loo nto, abafazi bathanda abafana abaneenwele ezithandwayo.
inyanga yokunyuka kwekhaltyhuleyitha
Lo mxube uphakathi unikezela uhlaziyo oluqhelekileyo kwiklasi ye-retro. Le khekhi inezinwele ezinenxalenye enzima kwaye yatshayela emva ngaphambili ukuze kwenziwe ulwakhiwo. Uhlobo oluhle, oluhle, jonga Ikama liphele kwaye icala iinwele .
Isimbo sendlela esiPhakathi esiPhakathi
Ukuphela okuphakathi kunokubonelela ngeenwele ezininzi zesini. Ukucheba iinwele okuphelileyo kusebenza kakuhle nazo zonke iintlobo zezitayile, kubandakanya le quiff imfutshane. Inqanaba eliphakathi liphela emacaleni likunika inketho yokongeza indawo enzima. Ekugqibeleni, amacala amafutshane aqhotyoshelweyo atsalela ingqalelo kwisitayile se-chic ngaphezulu.
Phakathi koLusu luphela
Oku kuphela kolusu kunokuthathwa njengokuvukela kwaye kushushu xa kudityaniswe noyilo lomgca kunye ne tattoo. Ukugqibezela inkangeleko embi yenkwenkwe, i-faux hawk fade ibhalwe ngokwendalo yevolumu ephezulu kunye nokuhamba.
Phakathi kweZero Fade
Njengoko igama libonisa, ukuphela kwaphakathi zero kuphumela kumacala achetyiweyo. Eyaziwa nangokuthi i-razor fade, ezi ntlobo zeenwele zilungile ekuvezeni intamo nobuso obufihliweyo Iitattoos . Kwaye ngasemva, le brashi yangasemva ibrashiweyo ijongeka ilunge ngakumbi ngenxalenye echetyiweyo kwelinye icala.
Lo mlo uphakathi wepadade ngumxube wecandelo kunye nepompo. Ngenxalenye enzima echetyiweyo kwizinwele, ubuqaqawuli bakudala buye baguqulwa baba yinguqulelo yanamhlanje. Ngenxa yokuguquguquka kwayo, sicebisa ukuba ipompadour iyaphela nawuphi na umntu onokuyikhupha.
isimbo seenwele ezithandwayo kubafana
Izinwele ezimfutshane zikhangeleka kakuhle nangamacala amafutshane. I-bald fade inokudala umahluko nokuba kukho iinwele ezincinci ngaphezulu. Esi sityalo sase-France sinemiphetho e-spiky kunye neendevu ezingqindilili sivelisa ukujonga okugugileyo.
Izinwele eziPhezulu eziPhezulu + eziPhakathi
Ngelixa iinwele ezijijekileyo kunye nezinobumba ezingaphezulu kunokuba nzima kwisitayile kwaye kunzima ukuzilawula, kusekho uninzi lweenwele ezilungisiweyo zamadoda. Ngamaza anzulu kunye nee-curls ezimbalwa ezimfutshane, ukuxubha iinwele zakho phambili kunye nolusu oluphakathi emacaleni kweziphumo yile ndlela inomdla kakhulu. Idityaniswe nokuzilungisa kakuhle, iindevu ezipheleleyo kwaye ujongeke kakhulu kubuchwephesha nakubomi bakho bobuqu.
Ukulinganisa iinombolo ezahlukileyo zokucheba iinwele kunokuba nzima. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba xa ubuza umchebi wakho ukuba aphele phakathi, ubonakalisa nje ukuba emacaleni nasemva ufuna ukuba inkqubo yokuphela iqale. Emva koko, abafana banokukhetha inani elingu-0, 1, 2, 3, okanye 4 lokuphela ukuze bathathe isigqibo sokuba indlela emfutshane iza kuhamba ngayo.
Idrop fade yindlela eyoyikekayo yokugcina izinto zinomdla emacaleni nasemva. Ukulahla okuphakathi kuphakathi kuqala phakathi kwentloko, kodwa endaweni yokuhlala inqanaba kuyo yonke indlela ejikelezayo, ukuphela kuyehla njengoko kuhamba ngasemva. Oko kuqala kufutshane neetempile kunokuphela kusondele entanyeni yakho ngasemva.
ithini ingoma yam ekhulayo
ubuso obumbhoxo bemilo amadoda
Fumana inyanga yelanga kunye nophawu oluphumayo
izitayela zeenwele zeenwele ezijikelezayo